Boqolaal katirsan shacabka Muqdisho oo waddooyinka u soo baxay si ay taageero ugu muujiyaan Raysulwasaaraha cusub ee Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBoqolaal katirsan shacabka Muqdisho oo waddooyinka u soo baxay si ay taageero ugu muujiyaan Raysulwasaaraha cusub ee Soomaaliya
February 24, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Boqolaal katirsan shacabka Muqdisho oo waddooyinka u soo baxay si ay taageero ugu muujiyaan Raysulwasaaraha cusub ee Soomaaliya. [Xigashada Sawirka: Radi Dalsan]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Boqolaal dadka reer Muqdisho ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho si ay taageero ugu muujiyaan Raysulwasaaraha cusub, sida ay ku waramayaan warbaahinta maxaliga ah ee gudaha Muqdisho.
Xasan Cali Khayre ayaa Madaxweyne Farmaajo shalay oo Khamiis ahayd u magacaabay Raysulwaasraha Soomaaliya.
Inta lagu guda jiro asbuucyada soo aadan, ayaa la filayaa in Raysulwasaaraha cusub uu hortagi doono baarlamaanka si uu u weydiisto codka kalsoonida.
October 15, 2016 Raysulwasaare Sharmaake oo ku howlan joojinta dagaalka Gaalkacyo
Wiil uu dhalay Faysal Cali Waraabe oo lagu dilay duqeyn Mareykanku uu ka geystay dalka Suuriya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wiil uu dhalay Faysal Cali Waraabe, oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Wadani ee Somaliland, ayaa lagu dilay duqeyn Mareykanku uu ka geystay gudaha dalka Suuriya dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay ee 2017, sida uu [...]